Atrikasa notanterahin’ny Sampandraharahan’ny Fandraharahana ankapobeny sy ny Fiahiana ny maha-olona (DARH) avy eto anivon’ny Antenimerandoholona. – Sénat de Madagascar
Atrikasa notanterahin’ny Sampandraharahan’ny Fandraharahana ankapobeny sy ny Fiahiana ny maha-olona (DARH) avy eto anivon’ny Antenimerandoholona.
March 5, 2019 RAMBELO Abel NIRINA
Nanantanteraka atrikasa lehibe niompana tamin’ny loha-hevitra hoe « Inona no mampiray antsika » ny teto anivon’ny Sampandraharahan’ny Fandraharahana ankapobeny sy ny Fiahiana ny maha-olona eto amin’ny Antenimierandoholona , izay teo ambany fiahian- dRamatoa RANDRIANASOLO Niaritiana Talen’izany fitantanan-draharaha izany.
Jery todika ny asa vita ho fanatsarana ny ho avy ary fanomanana ny fiatrehana ny taom-pivoriana ara-potoana roa eto amin’ny Antenimierandoholona no tanjona tamin’izany.
Fifanakalozana traik’efa tao anatin’ny adi-hevitra, nifarana tamin’ny fisintomana lesona samihafa no ventin-draharaha tamin’izany.
Maro ny hetsika notontosaina izay nadraisan’ny mpiara-miasan’ny Sampandraharaha rehetra tsy ankanavaka anjara.
Nandritra izany no nitondran’ireo lehiben’ny Sampandraharaha tsirairay avy fanazavana sy tatitra mahakasika ny asa vita nosahanin’izy ireo, teo ihany koa ny fanehoana ireo hetaheta entina hanatsarana ny asa, ka isan’izany ny mba hisian’ny fanofanana ireo mpiasa ho fanamafisana ny traik’efa izay efa ananan’izy ireo ary ny hanavaozana ireo fitaovam- piasana mba hahafahana manatanteraka an-tsakany sy an-davany ny asa.
« Ny asa no mampiray antsika ary ny Firaisan-kina no hery », izay no teny filamatra ho an’ity taona vaovao 2019 ity ; Hanomezan-danja ihany koa ny Antenimierandoholona .
Nandritra io fotoana io ihany koa no niarahaban’ireo mpiasa amin’ity fitantanan-draharaha ity ny Talen’ izy ireo : Ramatoa RANDRIANASOLO Niaritiana noho ny nahatratrarana ity taona vaovao 2019 ity.
Izao fiarahana izao moa dia natrehan’ireoTalen’ny Fitantanan-draharaha isan-tsokajiny sy ny Lehiben’ny Kabinetran’ny Kestora voalohan’ny Antenimierandoholona.